Anacaine® (အန်နာကိန်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Anacaine® (အန်နာကိန်း)
Anacaine® (အန်နာကိန်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Anacaine® (အန်နာကိန်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Anacaine® (အန်နာကိန်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
သာမန်အရေပြားထိခိုက်ခြင်း၊လည်ချောင်းနာခြင်း၊နေလောင်ခြင်း၊သွားပေါက်၍နာကျင်ခြင်း၊ယောနိ သို့မဟုတ် စအိုမှ သွေးယိုစီးခြင်း၊ခြေသည်းအတွင်းဖက်သို့ ပြောင်းပြန်ပေါက်ခြင်း၊လိပ်ခေါင်းဖြစ်ခြင်း အပါအဝင် ခန္ဓါကိုယ်အပေါ်ယံ နာကျင်ခြင်း အများအပြားအတွက် Anacaine® ကို အများဆုံးအသုံးပြုကြပါတယ်။
Anacaine® (အန်နာကိန်း) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဆေးလိမ်းမယ့်နေရာကို ကြိုတင်ပြီး သန့်စင်အောင် ဆေးကြောကာ ခြောက်သွေ့အောင် ပြန်သုတ်ရပါမယ်။ ပြီးရင် နာကျင်နေတဲ့ အရေပြားနေရာကို ညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်း ဆေးခပ်ပါးပါးလိမ်းရမှာပါ။ လက်ကို ဆေးလိမ်းရတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှတပါး ဆေးလိမ်းပြီးတာနဲ့ လက်ကို စင်ကြယ်စွာ ဆေးရပါမယ်။ မျက်လုံး၊နှာခေါင်း သို့မဟုတ် ပါးစပ်ထဲ ဆေးမဝင်ပါစေနဲ့။ တကယ်လို့ အဆိုပါနေရာတွေနဲ့ ဆေးထိတွေ့မိရင် ရေများများနဲ့ဆေးပစ်ပါ။
Anacaine® (အန်နာကိန်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Anacaine® ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Anacaine® ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Anacaine® ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
Anacaine® ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Anacaine® ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Anacaine® (အန်နာကိန်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Anacaine® သို့မဟုတ် အခြားသော ဆေးဝါးများနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်း။
ဆီးချို၊သွေးကြောဆိုင်ရာ ပြဿနာများ၊အရေပြား ဓါတ်မတည့်မှုများ၊သွေးအားနည်းရောဂါ၊ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ၊လေပြွန်ရောင်ရောဂါ၊အဆုတ်တွင်းရှိ လေအိတ်ကလေးများ ကပ်ခဲသောရောဂါ၊နှလုံးရောဂါ၊ဆေးထည့်မည့် နေရာတွင် ပိုးဝင်ခြင်း၊ကြီးကြီးမားမား အနာရှိခြင်း၊အရေပြားပေါက်ပြဲနေခြင်း၊ဆေးထည့်မည့်နေရာတွင် ထိခိုက်ဒါဏ်ရာ ရထားခြင်း စတဲ့ အခြားသော ပြဿနာတွေ ရှိနေခြင်း။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Anacaine® (အန်နာကိန်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Anacaine® (အန်နာကိန်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
Anacaine®ဟာ အောက်ဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဓါတ်မတည့်လက္ခဏာများ ခံစားလာရခြင်း ဥပမာ အနီစက်များ၊အင်ပြင်များထွက်ခြင်း၊ယားယံခြင်း/ရောင်ရမ်းခြင်း (အထူးသဖြင့် မျက်နှာ/လျှာ/လည်ချောင်းတို့တွင်)၊အလွန်အမင်း ငိုက်မျဉ်းခြင်း၊အသက်ရှုရခက်လာခြင်း။
ဘယ်ဆေးတွေက Anacaine® (အန်နာကိန်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Anacaine® ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Anacaine® (အန်နာကိန်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Anacaine® က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Anacaine® (အန်နာကိန်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ပျားတုပ်ခြင်း၊အသေးစားမီးလောင်ဒါဏ်ရာရခြင်း၊နေလောင်ခြင်း၊အင်းဆက်ကိုက်ခြင်း၊အပူလောင်ခြင်း : ဖြစ်တဲ့နေရာကို ၆-၈ နာရီခြားတခါ လိမ်းပေးပါ။(ပျားတုပ်ခံရတာဆိုရင်တော့ ဆေးမလိမ်းခင်မှာ ပျားနှုတ်သီးအစွယ်ကို ဦးစွာ ဖယ်ရှားရပါမယ်)။
ကလေးတွေအတွက် Anacaine® (အန်နာကိန်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အသက်၂နှစ်အောက် ကလေးလူနာများမှာ ဘယ်လောက်အချိုးအစားပေးရမလဲဆိုတာ အတည်မပြုရသေးပါ။ သင့်ကလေးငယ်အတွက် သောက်သုံးရန် စိတ်ချရမှုရှိချင်မှရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်ဆေးဝါးမဆို အသုံးမပြုရသေးခင်မှာ စိတ်ချရမှုအနေအထားကို အပြည့်အဝနားလည်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အချက်အလက်များ ထပ်မံရရှိရန်အတွက် သင့်ရဲ့ ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
အသက်၂နှစ်အထက် ကလေးများ :
Anacaine® (အန်နာကိန်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Anacaine® ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Anacaine® 10 % လိမ်းဆေး။
Anacaine® ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။